Ny Twitter angamba no iray amin’ireo ireo sehatra media sosialy matanjaka indrindra ankehitriny, nefa koa ny sarotra ampiasaina. Miezaka mamaky hafatra lalina izay misy fiantraikany amin’ny tarehintsoratra 280 (misaotra ny fanavaozana Twitter!) Dia tsy mora amin’ny ankamaroan’ny olona.
Matetika kokoa noho ny tsy hitanao ireo mpanoratra, mpandraharaha ara-tsosialy, ary gurus nomerika, mandany ora maro miezaka manamboatra bitsika izay fohy, mamy, ary mahitsy amin’ny teboka ary mbola manana toerana amy ho an’ny rehetra tenifototra tena manan-danja.
Ny bio Twitter dia manahirana ihany koa, raha tsy izany, raha toa ianao ka manana karazan-tarehy 160 hanazava hoe iza ianao, inona no ataonao, ary nahoana ny Twitter no mendrika hanaraka azy.
Ny fanaana biogrāfija Twitter cara dia mety tsy dia zava-dehibe loatra, fa eto ny zavatra: Ny bio ao amin’ny Twitter dia mety ho antony iray hamporisihana ny olona hanaraka anao – tahaka izany na tsia, manana zava-dehibe toy izany koa ny bio Twitter.
Mba hanomezana anao ny fomba tokony hananganana ny bio čivināt anao, dia nanangona ny biôzô hatramin’ny farany indrindra izahay izay afaka mahita eo amin’ny tontolon’ny twitter. Jereo ireo biôzôma marobe ireo ary antenaina fa ho voasarika ianao hanoratra iray tahaka ny azy ireo!
1 Ohatra 30 amin’ny Clever Bios ao amin’ny Twitter
1.1 Maiks Deividsons
1.2 Kerija Brauna
1.3 Kandijs Valšs
1.4 Ketija Kendala
1.5 Martins Bārtels
1.6 Sestā kausa izcīņa
1.7 Džons Klejs
1.9 Būs Ārnets
1.10 Džeisons Batemans
1.11 Alisons Leibijs
1.12 Alyssa Wolff
1.13 Tims Zīdelds
1.14 Deimons Lindelofs
1.15 Ny alahelony voalohany
1.16 Komēdijas centrā
1.17 Tailers Klarks
1.18 Džonija kausi
1.20 Elons Musks
1.21 Viktorija ny Secret
1.22 Ellen DeGeneres
1.23 Toms Hanks
1.25 Vecā garšviela
1.26 Melyssa Griffin
1.27 Nātans Latka
1.28 Ārons Lī
1.29 Makss Seddons
1.30 Džeisons Falls
1.31 Kat Chow
2 Mahita ny hatsikana ao aminao (sy ny Bioao Twitter anao)
Ohatra 30 amin’ny Clever Bios ao amin’ny Twitter
Čehu biogrāfija Twitter dia mety ho toerana malalaka hamerenana fialantsasatra fohy na ny hevi-dehibe momba anay ary i Maiks Davidsons, VP ny ny dizaina māja tao amin’ny Twitter, dia mahafantatra ny fomba hamenoana ny toerana kely.
Davidson dia mamoaka ny toerana mahatalanjona niasany talohan’izay izay ahitana ny NBCNews, Disney sy ESPN, saingy nyisarika ny saintsika dia ny fahazoan-dàlana ankehitriny izay "Čilins" fotsiny. Izvēlēties daudzkārtīgu VP amin’ny Design tao amin’ny Twitter aza dia nahafantatra ny fomba fihomehezana amin’ny biôzy Twitter.
Raha mikaroka amin’ny alalan’ireo toro-hevitra ianao eto Webhostingsecrerevable, avy eo dia sarotra be ianao. Ary ao amin’ny Twitter, nē-geek dia zavatra tokony rentharehana, rotaļlieta na naon’i Carrie Brown tamin’ny biogrāfija.
Maneho hatsaram-boninahitra i Brown manoloana ny takelaka misy azy amin’ny alàlan’ny fiantsoana azy ho "Geek ao amin’ny ordinatera manontolo", āri "Manambady amin’ny ordinatera" naudas manangana ny "takelaka roa momba ny solosaina ho avy".
Sarotra amin’ny mpanoratra iray ny mijoro eo an-dranomasin’ny mpanoratra ao amin’ny Twitter saingy i Candice Walsh kosa nahavita nanao izany tamin’ny bio-Twitter. Walsh dia nametraka ireo zavatra roa fantatra fa ilay voalohany amin’ny bio, dia ny rudmatis mandeha sy tena tia boky.
Mazava ho azy, dia mbola afaka nanasa ny androany ho rotaļlieta ny mpandrindra ny seraseran’ny fikambanam-behivavy izy, miaraka amin’ny tontolon’ny Twitter.
Mpitarika ara-media sosialy Katie Kendall dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fampiasana tenifototra amin’ny biôseo sy ny fomba hanamboarana azy ireo amin’ny fomba tsy misy. Ny bio Twitter ao aminy dia manome vahaolana haingana amin’ny hoe iza izy ary inona ny tombontsoany (rotaļlieta ny spāņu fofona sy Pinata Maker) naudas mbola nampiana tenifototra ho tia an’i Tiki sy mpankafy DIY.
Miaraka amin’ny fampiasana tenifototra, Kendall dia nanao ny bio-lanjany bebe kokoa, indrindra rehefa mikaroka ireo tenifototra ao amin’ny Twitter ny olona.
Martin Bartels dia mpanoratra hafa izay nahavita nanohitra ny bio tokany. Raha ny fahitako azy, Bartels dia toy ny mpivarotra varotra rehetra, nanova ny tenany ho fotoan-dry zareo manokana izy (izay fomba mahafinaritra mahalaza azy).
Na dia olona mpanao hatsikana mafonja aza izy, dia mbola sariaka amin’ny mpitsidika azy i Bartels amin’ny famporisihana azy ireo "hijanona amin’ny fitsidihana indray mandeha".
Sestā kausa izcīņa
Čats hatsikana dia afaka manampy ny maha-izy azy ny bio sy mpanoratra ao amin’ny Twitter Seza amin’ny endrika fampiasana Poety amin’ny fanetre-tena mahatsikaiky dia ohatra tsara indrindra amin’ny famenoana lainga sasany raha mbola mampiroborobo hoe iziana.
Na dia mety ho kivy aza ny siokany sy ny bio, ny kaonty Twitter-ny dia mampangorintsina izay manana mpanjohy 100,000.
Araka ny voalazan’ny tranonkalany, i John Cleese dia mpanoratra, mpilalao sarimihetsika, ary toa, olona ambony. Mazava ho azy fa ny ankamaroan’ny olona dia mahalala ny maha-mpanao hatsikana azy ary ny bio ao amin’ny Twitter dia maneho ny hatsikany amin’ny zava-misy fa mbola velona izy, mifanohitra amin’ny tsaho.
Azony natao mihitsy aza ny nametraka ny andian-dahatsary momba ny "fitsangatsanganana an-dalamby" ary raha mpankafy Monty Python ianao dia tena sarobidy ny download!
Fantatrao ve fa lama dia afaka mijaly avy amin’ny aretin’i Berserk lama, fepetra izay ahiahian’ny iray lama fa ny tompon’olombelona ihany koa dia lama, ka mahatonga azy ireo ho mahery vaika?
Eny ary, hahalalanao bebe kokoa ny momba ireo zava-misy ireo sy ny "zavatra tena tsy misy dikany izay tsy tokony ho fantatrao mihitsy" ao amin’ny Uberfacts.
Vai Arnett dia mpilalao sarimihetsika fanta-daza noho ny feony malaza sy ny sarin’i Betmens tao amin’ny Lego mahomby: Betmena filma. Sayy ny tena zava-dehibe dia fantany ny fisakaizany akaiky amin’ny mpilalao sarimihetsika Jason Bateman ary toa mpanohana azy.
Famerenana mahafinaritra ny fisakaizam-piarahamonina fanta-daza izay nanomboka rehefa samy niasa tao amin’ny andian-tsarimihetsika fanta-daza fanta-daza, nosamborina izy ireo.
Tieši tokony havelan’ny namanao akaiky indrindra i Jason Bateman, ary nanonona an’i Arnett tao amin’ny Twitter-ny izy tamin’ny nanoratany fa izy dia "Will Arnett draugs".
Taratasy tsotra izay manatsara kokoa ny fifankatiavan’izy ireo raha mbola maneho ny endriky ny lozisany izy. Ankehitriny, ny zavatra ilaintsika dia i Joe Biden sy Barack Obama manao zavatra mitovy amin’ny fanehoana ny fisakaizan’izy ireo akaiky!
Tahaka an’i Bateman sy Arnett, Alison Leiby, mpanoratra sy mpilalao tantara an-tsehatra dia milalao ny fisakaizan’i Alyssa Wolff, mpilalao sarimihetsika, ao amin’ny Twitter-ny noho izy tsy miresaka afa-tsy azy fotsiny koa fa hitondra ny sakafony amin’ny fomba mahazatra azy izy ireo.
Tsy nanadino ny hampiditra ny mailaka ihany koa izy, raha toa ka mila manontany azy ianao hoe inona no karazan-tsakafo hihinana azy ireo.
Alyssa Wolff nodaļa amin’ny paikadiny BFF miaraka amin’i Alison Leiby dia somary fohy sy mahitsy hatrany. Manonona ny Leiby ao anatin’ny bio izy amin’ny maha-mpinamana fisotroana azy, izay toa izy no misotro amin’izao fotoana miaraka izao. Na Wolff sy Leiby na samy ny tanjon’ny mpinamana ho antsika rehetra ao amin’ny Twitter!
Jauns biogrāfija Tims Zīdels ir izveidojis manteča retrospektīvu, kas ir izlikts ar jaunu majoy tanteraka ny zava-drehetra aria miaina ny fiainantsika ho rotaļlieta ny miliaridera tsara tarehy (na cara tarehy). Indrisy anefa fa ny ankamaroantsika dia tsy miliaridera ary / na cara tarehy.
Tsy azontsika antoka raha afaka manao ny marina i Siedell, saingy azontsika antoka fa mahalala vazivazy lehibe izy.
Ilay namorona ilay andiany malaza malaza HAFA ny fahafantarana ny fanoratana bio mahomby izay manasongadina ny anjarany ho iray amin’ny mpamorona ny fampisehoana ary ny fomba tsy ahalany izany, tahaka ny ambiny rehetra.
Damon Lindelof dia nahatsapa fa ny ankamaroan’ny mpankafy azy dia manontany azy matetika momba ireo teboka sy tantara an-tsehatra ary mampihomehy ny tenany amin’ny filazany fa tsy fantany ilay tantara, na dia teo aza az ny ny maha-mpamor.
Ny alahelony voalohany
Ao amin’ny fiaraha-monina amin’izao fotoana izao, ny "olana voalohany eran-tany" dia fifandirana tsy mitsaha-mitombo ary ity kaonty Twitter ity dia mitazam-pifaliana amin’ireo zavatra madinidinika izay tian’ny olona mitaraina: misafidy izay horonantsary hofaina, mandidy ny fisotroana diso, na manoratra bio Twitter.
Ny fanoratana bio ao amin’ny Twitter dia mety ho fanaintainana (ny fanaintainana manerantany voalohany raha tianao), ary rotaļlieta ny manaparitaka ny lohan’izy ireo miezaka mamantatra ny fomba hanoratana ny tena marina sy tena tsara, dia nandeha niaraka tamin ireo ary nanaiky fa afaka ‘Tsia.
Avelao jebkura komēdijas centrā, tambajotra izay mamba ny hatsikana, hna hamamafisana fa hitondrana ny Comedy ao amin’ny Twitter. Fohy, tsotra ary mahitsy hatrany. Ny fitazonana hatrany amin’ny marika nefa mbola manihany.
Tahaka ny Comedy Central, es Tailers Klarks dia mahafantatra hoe iza izy ary tsy matahotra matahotra ny mamaritra ny tena marina. Tsapany fa tsy "mahira-tsaina" izy fa "mitaratra ny solomaso fotsiny", fa ny tena zava-dehibe dia "mitoetra tsara" izy.
Raha tsy azonao an-tsaina ny fomba hanoratana bio maromaro, indraindray dia teny vitsivitsy monja momba ny tenanao ihany no ampy.
Johnny Cupcakes dia mari-pankasitrahana malaza any Boston, fa tsy bokotra cupcake, na dia eo aza ny anarana. Amin’ny anarana toy ny Cupcakes Johnny, afan manantena ianao fa ho feno feno bitsika manjavozavo izay mifandray amin’ny akanjo sy ny fomba amam-panao ny kaontiny Twitter.
Ny bio Twitter ao amin’ny Twitter dia ohatra iray tonga lafatra amin’ny fomban-kiran’ny hatsikana mamaoka amin’ny hatsikana, izay nanolotra azy ireo ho andrana lehibe sy mavitrika.
Skittles dia mahafantatra hoe iza ireo mpihaino kinendry (mpianatra any amin’ny sekoly ambaratonga faharoa na olona manana fitiavana amam-bika), ary tsy matahotra mampiasa teny toy ny "mahatalanjona"Mba hamaritana ny bio čivināt amin’ny Twitter.
Na dia marika goavana aza i Skittles, dia vitan’izy ireo ny mametraka ny atbalstrany amin’ny endriny izay mifanaraka amin’ny sary mamy sy marevaka.
Elon Musk dia zavatra maro ho an’ny olona maro, mpanavao, visionion, mpandala milamina, fa ho an’ny tenany sy ao amin’ny bio Twitter, izy dia "Cepuru pārdevējs" fotsiny.
Mazava ho azy, mihoatra noho izany izy. Fa miasa kosa i Musk amin’izao fotoana izao amin’ny tetikasa vaovao iray izay mampiditra ny tonelina haingam-pandeha amin’ny tanàn-dehibe an-tanàn -hibite ary ny iray amin’ny tetikasa dia ny mivarotra kavina mba hanairana ny saina. Fomba entina hanamboarana ny tetikasany izany raha mbola mahatsikaiky.
Viktorija ny Secret
Ilay tsiambaratelon’i Victoria dia mahalala hoe iza izy ireo ary inona no andrasan’ny mpihaino azy ireo. Izany nav antony ilazan’ny bio Twitter azy fa ny toerana misy ny “Angels, Bombshells sy ireo mpanaraka ny firaisana ara-nofo” dia afaka mahazo ny habetsahan’ny firaisana ara-nofo isan’andro amin’ny orinasan-damba.
Na izany eo amin’ny fahitalavitra, ny tena fiainana, na ny tambajotra sosialy, tsotra fotsiny ny Ellen DeGeneres. Noho izany dia afaka manantena ianao fa ny bio biogrāfija ho azy dia hanaitra sy hampihomehy. Raha ny fahitana azy, ankoatra ny maha-mpanao hatsikana sy ny mpanentana ny The Ellen Show, izy koa dia toy ny nypanamory fiarandalamby.
Tsy marina raha tsy marina izany na tsia, zavatra iray azo antoka, tena marina tokoa ireo bitsika ary tena mahavariana.
Toms Hanks nav tena mpilalao "katrs vīrietis". Raha nanoratra ny tenany ho bio malaza ao amin’ny Twitter izy, dia marina tsara i Hanks amin’ny hoe indraindray izy dia manana endrika tsara ary indraindray tsy izy.
Tsara tarehy izy na tsia, mbola tia an’i Toms Hanks ir aromāts amin’ireo mpilalao sarimihetsika tsara indrindra izahay ary manana kaonty Twitter tsara tarehy tsara.
Shonda Rhimes no mpanoratra ho an’ny Anatomie Grey ao anatin’ireo tantara malaza, ary rotaļlieta ny an’i Lindelof, fantāzijas cara ny hadalana izay misy ny fahitalavitra.
Matetika ny olona dia mibitsika ny heviny momba azy momba ilay andian-tsarimihetsika maromaro, izay mety hahasorena azy. Najanony daholo izany tamin’ny fametrahana ampahany tsara ao anaty bio: "Tsy tena izy, labi?". Izany no hikatona ireo mpitsikera!
Fantatr’ireo mpisera tsy mendrika amin’ny sarimihetsika teritery / mpilalao Terry Crews, Bio Old Spice ao amin’ny Twitter dia manana ny fitantanana ny kaonty media sosialy izay mahafantatra ny fomba mahatsikaiky ary mbola marina amin’ny marika.
Ny bio dia tsy voatery ho fanehoan-kevitra be loatra momba ny tenanao. Indraindray, ny teny ilainao dia teny vitsivitsy ihany no omeny ny olona hahafantatra ny momba anao sy ny Spice Old, momba ny "Muskuļi, sīkas, lāzeri, kuponi, dāvanas".
Raha tsy azonao atao ny misarika ny sain’ny mpihaino amin’ny laharana voalohan’ny bio anao, dia tsy manao izany ianao. Ny bio Twitter an’ny Melyssa Griffin dia ohatra tsara amin’ny fomba azo ampiasaina mba hisarihana ny sain’ny olona ny laharana voalohan’ny bio.
Amin’ny fampisehoana ny aterineto atrikasa maimaim-poana, es Griffin dia afaka nitantara ny momba ny asany ho rotaļlieta ny dokambarotra dizitaly ary anisan’izany ny rohy mankany amin’ny aterineto. Ankehitriny izany dia mārketinga ara-barotra jebkura!
Ny Podcaster sy ny onjam-peo nomerika Nathan Latka dia fantatra amin’ny etikany miasa mafy, noho izany dia tsy mayagaga antsika ny mahafantatra fa mihazakazaka amin’ny Power Nuclear.
Latka dia manampy amin’ny lafiny manan-danja amin’ny asany (izpilddirektors anTny TheTopInbox.com sy ny podcast miaraka amin’ny downloads 4.5 tapitrisa) ary ny rohy mankany amin’ny asany mba ahafahan’ny mpihaino haingana miditra amin ‘ izy ireo.
Īrijas manam-ļaunizana mamba ny plašsaziņas līdzekļu skaitam Ārons Lī dia mahafantatra ny zavakanto amin’ny famolavolana bio-casarintany Twitter. Manasongadina ireo hevi-dehibe rehetra ao amin’ny bio izy, izay mpitantana ny faritra amin’izao fotoana izao ao amin’ny AgoraPulse, izy no mianatra ny hakelin’ny cappuccino, ary ny maha-siramamy azy amin’ny volo mahafatifaty.
Arahaba, manaiky izahay fa manana volo mahafinaritra ho an’ny introverta ianao!
Mpanao gazety sady mpikatroka hafahafa avy any ivelany i Max Seddon dia mahafantatra fa ny hatsikana dia ampahany manan-danja amin’ny bio Twitter. Ny fankasitrahan’i Seddon ho an’ny mpilalao comédie Yakov Smirnoff dia manao asa goavana amin’ny fanatsarana ny asany amin’ny maha-mpanao gazety monina any Rosia azy, ary mbola maneho ny loza mety hitranga aminy.
Antenaina fa tsy nitatitra ny vaovao momba ny bio sy ny siokany Twitter i Seddon.
Betsaka ny olona no manana atbalstara na olona manokana "an-tserasera" rehefa mamorona kaonty media sosialy, ka izany dia mamelombelona ny olona tahaka an’i Jason Falls izay manampy ny fanakatsakanana ny kaonty media sosialy sy ny Twitter-ny.
Ny maha "stars, mpanoratra, mpandaha-teny" azy, dia manoratra ny bio rotaļlieta izany ny ony, tsy misy dikany ny maha-hafa azy afa-tsy ny tenany ihany. Izany karazana fihetsika manerana ny tany izany no mahatonga ny bio Twitter tokana.
Alefaso jebkura amin’i Kat Chow hanoratra Twitter izay tsy vitan’ny hoe ny fahombiazany, ny asa aman-draharahany, ary ny fampahalalam-baovao mifandraika aminy, fa izy koa dia manamboatra fitetezana amin’ny trolls ma-anserasera izay.
Izany dia mampiseho fa mbola afaka hivarotra ny marikao ianao ary iza ianao ao amin’ny media sosialy raha manaisotra ireo mpanohitra.
Mahita ny hatsikana ao aminao (sy ny Bioao Twitter anao)
Misy lohahevitra iraisana amin’ny ankamaroan’ny bio voatanisa etsy ambony ary ny zava-misy dia maro amin’izy ireo no mampihomehy. Na mpitoraka bioloăija un dalamby na mpihira jebkura amin’ny onjam-peo an-tserasera ianao, manana fahatsapana vazivazy mikasika ny tenanao dia afaka manampy ny mombamomba ny olona amin’ny marikao ary mahatonga anao hifandray kokoa aminony mpiha.
Mila fanampiana hanatsara ny soratrao ve ianao? Jereo ny mpitari-dalana anay mba hanampy hanatsara ny fahaizanao hanoratra ho mpitoraka blaogy!
Cleo Twitter Bios izay haha​​tonga anao handeha Oooh sy Aahh